Waldhabdeen Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa fala argachuufi - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fuula feesbuukii Waajira Ministeera Muummee
Goodayyaa suuraa Miseensota koree araaraa Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad miseensota koree araaraa Ortodoksii Itoophiyaa waajira isaaniitti yaamanii waliin dubbatan.
Waldhabdeen amantaalee gara garaa keessatti walii walii isaanii gidduu jiru xiyyeeffannaa bulchiinsa Dr. Abiyyi waan argate fakkaata.
Dhiyeenya kana Koree Fala Barbaaduu Musiliimaa waliin haasa'aniiru.
Gama araaraan nagaan akka bu'u taasisuutiin fakkeenya ta'uu akka qaban miseensota koree kanaatti kan himan Ministirri Muummichaa, Bataskaanittiin nagaa ta'uun biyyi nagaa ta'uu akka ta'e ibsaniiru.
Torban dhufu keessa turtii Ameerikaatti taasisaniin gatii nagaa buusuun kaffalchiisu kamiyyu kaffaluudhaan nagaan Bataskaanittii akka deebiyu carraaqqii akka taasisan koree araaraa miseensota 11 of keessaa qabu kana adaraa ittiin jechuu isaanii odeeffannoon fuula feesbuukii Waajira Feesbuukii Ministeera Muummeerratti ba'e ni mullisa.
Imalli araaraa kun boqonnaa isa dhumaarra ga'uufi abbootiin amantaa gama lamaaniin jiran walii galteerra ga'uudhaan yeroo dhiyoo keessatti nagaafi jaalalli Itoophiyaatti akka labsamu miseensonni koree araaraa kun ibsaniiru.
Abbootiin amantaa Itoophiyaafi Ameerikaa jiraatan adeemsa araaraa kana fudhatanii deebii qajeelaa kennuu isaaniitiif miseensonni koree kanaa galateeffataniiru.
Koreen araaraa miseensota kudha tokko of keessaa qabu kun torban dhufu gara Ameerikaatti imalanii adeemsa araaraa kana milkiin xumuranii Sinoodosii Ameerikaa jiru qabatanii gara biyyaatti akka deebiyan ni eegama jechuun odeeffannoon fuula feesbuukii Waajira Ministeera Muummeerraa argame addeesseera.